बजेट अभावले रोकियो वृद्धसिंह मार्गकोे काम | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार बजेट अभावले रोकियो वृद्धसिंह मार्गकोे काम
बजेट अभावले रोकियो वृद्धसिंह मार्गकोे काम
तनहुँ । मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्डको विकल्पको रूपमा लिइएको वृद्धसिंह मार्गको काम बजेट अभावले रोकिएको छ । बहुवर्षीय उक्त आयोजना निर्माणका लागि रू. २५ करोडमा ठेक्का दिइएको थियो । आयोजनाको पहिलो चरणमा १० करोड बजेट विनियोजित भई काम भएकोमा यसपटक बजेट अभावले सडक निर्माण कार्य ठप्प हुने भएको हो ।
सरकारले आव २०७४/७५मा सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण गर्न १० करोड बजेट दिएको थियो । चालू आवमा भने बजेट नै नछुट्याएपछि सडक निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको हो । यो मार्ग दमौलीबाट मात्र ५० किलोमिटरमा नारायणगढ पुग्न सकिने वैकल्पिक मार्ग हो । चितवनको घुमाउने र तनहुँ जोड्ने पुलको काम शुरू भए पनि यो सडक खण्डमा अहिले सामान्य ग्राभेल गरिएको छ । ३१ किलोमिटर दूरीको वृद्धसिंह मार्ग सञ्चालनमा आएपछि दमौलीबाट उक्त मार्ग हुँदै नारायणगढसम्मको दूरी २४ किलोमिटर छोटो पर्न आउँछ ।
ग्राभेल भएपछि बाटो पिच हुने आशमा रहेका स्थानीय बासिन्दाहरू सडक निर्माण बीचमै रोकिने भएपछि अहिले निराश भएका छन् । उपभोक्ता समितिका निवर्तमान अध्यक्ष विश्व बास्तोलाले जनप्रतिनिधिको कम चासोका कारण उक्त सडक खण्डका लागि राष्ट्रिय योजनामा पार्न नसकिएको बताए । सरकारले यो विषयलाई प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत निर्माणाधीन उक्त सडकका लागि सरकारले थप बजेट नदिएपछि काम बीचमै रोकिने सम्भावना बढेको डिभिजन सडक कार्यालय तनहुँले बताएको छ ।
कार्यालयका डिभिजन प्रमुख भानु जोशीले गत आवमा ठेक्का सम्झौता गरी अहिलेसम्म पूरै सडक खण्डमा ग्राभेलको काम पूरा भए पनि थप बजेट नआउँदा चालू आवमा कामको भुक्तानी दिनसमेत समस्या भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘साढे २ वर्षको ठेक्का सम्झौता भएको हो । पहिलो चरणको भुक्तानी दियौं, अब बजेट नै छैन, कसरी काम अघि बढाउने ?’
ठेकेदार राजकुमार खड्काले अहिलेसम्म रू. ११ करोडभन्दा बढीको काम गरिसके पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । ‘हामीले काम गरेबापत भुक्तानीसमेत आएको छैन । अब रकम भुक्तानी नभएसम्म काम अगाडि बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने । २०७४ भदौमा ठेक्का सम्झौता भएका उक्त सडक खण्डको ७० प्रतिशत कार्य पूरा भएको छ । ग्राभेल, पक्की नाला निर्माण, ह्युम पाइप राख्नेलगायतका काम पूरा भएको खड्काले जानकारी दिए ।